April 2018 – DigitalTimes.com.mm
FEATURES gadgets HOW TO Softwares & Application Softwares & Application Tips
ဒစ်ဂျစ်တယ် ကမ္ဘာကြီးမှာ ဟက်ကာတွေရဲ့ ရန်ကို အမြဲကြောက်နေရပါတယ်။ အဲဒီအတွက် Facebook က သင့် အကောင့်ကို လုံခြုံရေး အလွှာတစ်ထပ်ဖြင့် ကာကွယ်နိုင်အောင် ပြုလုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ USB…
Android One ဖုန်း၂မျိုးထုတ်လုပ်နေတဲ့ Xiaomi
ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာတုန်းက တရုတ်စမတ်ဖုန်းကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Xiaomi ကနေ Mi A1 ဖုန်းတွေကိုမိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ Mi A1 ကတော့ Xiaomi ရဲ့ ပထမဆုံး Android One ဖုန်းတွေဖြစ်ပြီး…
သင့် Android ကို Malware များ ရန်ှမှ ကာကွယ်နည်း (၃) ခု
လအနည်းငယ်ကြာတိုင်း Android ဆော့ဝဲမှာ လုံခြုံရေး ဟာကွက်များ ထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ အဲဒီအကျိုးဆက်ကြောင့် Android Smartphone သန်းနဲ့ချီပြီး အန္တရာယ်ရှိနေပါတယ်။ Android ဟာ ကမ္ဘာမှာ လူသုံးအများဆုံး Mobile…
တရုတ်နိုင်ငံမှာခွင့်ပြုချက်ရသွားခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ Samsung Galaxy Note9ဖုန်းသစ်များ
ဒီနှစ်ဒုတိယနှစ်ဝက်အတွင်းမှာ Samsung ကနေ နောက်ထပ် flagship ဖုန်းသစ်တစ်လုံးထွက်ဖို့ရှိနေပါတယ်။ လောလောဆယ်တော့ Galaxy Note9လို့ဆိုထားပြီး သူနဲ့ပတ်သတ်တဲ့သတင်းတွေလည်း တော်တော်ကြားနေရပါပြီ။ မကြာခင်မှာပဲ benchmark…
ကိုယ်ပိုင် Operating System တစ်ခုဖန်တီးနေတဲ့ Huawei
ZTE အပေါ် US ရဲ့စမတ်ဖုန်းတင်သွင်းမှုတားမြစ်ချက်က Huawei ကိုတုန်လှုပ်စေတယ်ဆိုရင် ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ZTE ကို Android လိုင်စင်တွေမပေးတော့ဘဲ platform တောင်မရှိအောင်လုပ်ပစ်လိုက်တာပါ။ တကယ်လို့သာ Huawei မှာဒီလိုပြဿနာတွေဖြစ်လာခဲ့ရင်??…
Facebook မှာ “Comment” တွေကို Downvote ပေးလို့ရတော့မည်
Facebook က ယခုနှစ် အစောပိုင်းမှာ ကွန်းမန့်များကို Upvote, Downvote ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ စွမ်းရည်ကို ထည့်သွင်းပေးမယ်လို့ အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ Public Post များမှာ ဒီလို ပြုလုပ်နိုင်မှာ…
Sleep Mode ပါလာတဲ့ Facebook Messenger Kids
Facebook က ကလေးများ လုံခြုံစွာ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Messenger Kids ကို ဖန်တီးပေးထားပါတယ်။ မိဘများက Messenger Kids မှာ ကလေးများရဲ့ Contact Lists…
Instagram မှာ Slo-mo feature နဲ့တခြား feature များစွာပါဝင်လာနိုင်
Instagram မှာနောက်ထပ် feature အသစ်၄ခုကိုတွေ့မြင်ရတော့မှာပါ။ တစ်ခုကတော့ Quick Reaction တွေပါတဲ့ Story Reaction ပါ။ ဒါက မက္ကဆီကိုမှာတော့ရနေတာ လတော်တော်ကြာပြီလို့ဆိုပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက user…
တခြားစမတ်ဖုန်းစပီကာတွေထက် အသံ ၁၀ဆ ပိုကျယ်တဲ့ LG G7 ThinQ speaker
LG G7 ThinQ teaser ပုံတစ်ခုတော့ထွက်လာခဲ့ပြန်ပါပြီ။ အရင်တစ်ခေါက် 1000 nit super bright display ပြီးတဲ့နောက် နောက်ထပ်အမိုက်စား feature တစ်ခုက “Boombox…
Android မှာ Safe Mode ဖြင့် ပြဿနာများကို ဘယ်လို အဖြေရှာမလဲ ?
သင့် Android Device ကောင်းကောင်း အလုပ်မလုပ်တော့ရင် Hard Reset လုပ်ခြင်းဖြင့် ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။ Hard Reset လုပ်ရင် Apps များအပါအဝင် သင့်ရဲ့…
ကင်မရာ၄လုံး မှန်လိုကိုယ်ထည်နဲ့ HTC U12+
ထွက်လာမယ့် HTC U12+ ရဲ့အပြီးသတ်ဒီဇိုင်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီး hands- on ပုံတွေတော့အများကြီးထွက်လာပါပြီ။ ဒီနှစ်မှာတော့ ထိုင်ဝမ်အခြေစိုက် HTC ကုမ္ပဏီက ဒီနှစ်ရဲ့တစ်ခုတည်းသော flagship ဖုန်းတစ်လုံးကိုမိတ်ဆက်လာမှာဖြစ်ပြီးတော့ Samsung Galaxy…
ဥရောပမှာရောင်းအားအကောင်းဆုံးဖုန်းဖြစ်လာတဲ့ Huawei P20 Pro
Huawei P20 Pro တွေရဲ့ရောင်းအားက­ အနေ­­ာက်နိုင်ငံမှာတော့စံချိန်ချိုးနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ သူနဲ့အတူထွက်ခဲ့တဲ့ P20 ဖုန်းတွေကတော့ တရုတ်နိုင်ငံမှာ ၁၀စက္ကန့်အတွင်း ဒေါ်လာ၁၅သန်းဖိုး ရောင်းချနိုင်ခဲ့တဲ့အထိ အောင်မြင်ခဲ့တာပါ။ မတ်လ၂၇ရက်နေ့တုန်းက ဥရောပမှာ P20…
Gionee က F205 နဲ့ S11 Lite တို့ကို အိန္ဒိယမှာ ရောင်းချ
Gionee က ခေတ်စားနေတဲ့ မျက်နှာပြင် အရှည်များပါတဲ့ F205 နဲ့ S11 Lite တို့ကို အိန္ဒိယမှာ ရောင်းချပေးလိုက်ပါတယ်။ ဖုန်း နှစ်လုံးစလုံးမှာ Face Unlock…
18:9 Screen နဲ့ Dual Rear Camera များပါတဲ့ Coolpad Cool 2
Coolpad က စမတ်ဖုန်း အသစ်တစ်လုံးကို မိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အမည်မှာ Coolpad Cool2ဖြစ်ပြီး တန်ဖိုးနည်း စမတ်ဖုန်း ဖြစ်ပါတယ်။ တန်ဖိုးနည်း ဆိုပေမယ့်…
ခိုးခံရတဲ့/ ပျောက်သွားတဲ့ iPhone ကို ဘယ်လိုရှာမလဲ??
ကိုယ့်ရဲ့ iPhone လေးပျောက်သွားတယ်ဆိုတာ တော်တော်လေးဝမ်းနည်းစရာကောင်းလွန်းပါတယ်။ ဖုန်းကိုနှမြောတာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ဒေတာတွေအရေးကြီးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် iOS ရဲ့ “Find My iPhone” လုပ်ဆောင်ချက်လေးကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ပျောက်သွားတဲ့ဖုန်းကိုခြေရာခံနိုင်တဲံအပြင် လှမ်းပြီးလော့ခ်ချလို့ရနိုင် ဒေတာတွေလှမ်းဖျက်လို့ရနိုင်ပါတယ်။…